နာလဲထျန်မဲ့ပုံ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on April 2, 2021 Author admin	Comments Off on နာလဲထျန်မဲ့ပုံ
ကျွန်တော်တို့ရည်စားသက် သုံးလကျော် ဆယ်တန်စာမေးပွဲ ဖြေအပြီးမှာခိုးပြေးခဲ့ကြတယ် ခိုးပြေးတဲ့နေရာကတော့ ကျွန်တော်အဒေါ်အပျိုးကြီးဝယ်ထား တဲ့အိမ်ကိုခိုးပြေးခဲ့ကြတယ် အဒေါ်ကတာဝန်နဲ့နယ်ကိုသွားနေရ တာဆိုတော့ အဲ့အိမ်မှာဘယ်သူမှ မရှိ့ကြဘူး ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အိမ်ကိုအရင်ထဲက တစ်လကိုတစ်ကြိမ် လောက်တော့သွားဖြစ်တယ်အဒေါ်က အိမ်ရှင်းဖို့ မီတာဆောင်ဖို့ အတွက် ဆိုပြီးအိမ်သော့အပိုပေးထားတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ ခိုးပြေးကြတော့ အဲ့အိမ်ကိုပဲခိုးပြေးခဲ့ကြတယ် အိမ်အပြင်ကိုတော့ထွက်လို့မရဘူးပေါ့ ဒါမှကျွန်တော်တို့ ဒီယောက်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိကြမှာလေ စားဖို့သောက်ဖို့အတွက်ကို အရင်အဲ့အိမ်ကိုသွားထဲက ဝယ်ဖြည့်ထားတယ် ညဆိုရင်တော့အိမ်အပြင်မီးတွေက အချိန်အလိုအလျောက်စနစ်တပ်ထားတဲ့အတွက်ညနေခြောက်နာရီခွဲဆိုရင်လင်းနေပြီ အိမ်ထဲမှာတော့ညအိပ်မီးလောက်ပဲထွန်းလို့ရတယ် လိုက်ကာအထူတွေတက်ထားတော့အပြင်က ကြည့်ရင် ညအိပ်မီးလောက်ပဲထွန်ထား တာဆိုရင်အထဲကအလင်းက အပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူး အဲကွန်းတော့ဖွင့်ထားလို့ရတယ် အိမ်ကဘယ်ဘက်ကိုငါးပေပဲခွာပြီး ကပ်ဆောက်ထားတော့ ညဘက်မှာပေသုံးဆယ်လောက် လွတ်နေပြီးညာဘက်ဘေးခြံကလဲလူမနေ အိပ်ခန်နဲ့အဲကွန်းက ညာဘက်မှာဆိုတော့ အဲ့ကွန်ဖွင်းထားတာဘယ်သူမှ မသိနိုင်တော့ဘူးပေါ့။
အိမ်အခြေအနေကိုပြောပြနေတာ အကြောင်းရှိ့လို့ပါဗျာ တမျိုးမထင်ပါနဲ့ ကဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ပထမဆုံး မင်္ဂလာဦးညအကြောင်းလာပြီဗျာ ကျွန်တော်တို့အဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားတော့ည ရှစ်နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီ အိမ်ထဲရောက်တော့ ကျွန်တော်က ‘ချစ်ရေချိုးမလား’ ‘ကို အရင်ချိုးလေ ပြီးမှပဲချစ်ချိုးတော့မယ်’ အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲ ရေချိုးပြီးအဝတ်စားလဲလိုက်တယ် နဂိုထဲကအဲ့အိမ်မှာ ကျွန်တော်အဝတ်တွေရှိ့နေတော့အစဉ်ပြေတာပေါ့ ပြီးတော့သူရေသွားချိုးတယ် သူမှာကအဝတ်အပိုမပါတော့ ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ထည်ထဲသော ပုဆိုးနဲရှပ်လက်ရှည်တစ်ထည်ပေးလိုက်တယ် ကျွန်တော့် အဝတ်တွေဝတ်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံက ကပိုကရိုလေးနဲ့ ရည်းစားဘဝဘာမှမလုပ်ခဲ့ရသမျှ ဒီညတော့အတိုးချပြီပေါ့ဗျာ ‘ချစ် အိပ်ကြရအောင်’ ‘ကို ကလဲ အစောကြီးရှိ့သေးတယ်အိပ်သေးဘူး TV ကြည့်ရအောင်နော်’ ကျွန်တော်လဲအိပ်ဖို့ကိုအမျိုးမျိုးပြောတာပဲမရဘူး TV ကြည့်မယ်ပဲ လုပ်နေတယ် အဲဒါနဲ TV ပဲထိုင်ကြည့်နေလိုက်တော့တယ် သူ့ကိုဖက်ထားပြီး သူ့လက်မောင်လေးတွေကိုပွတ်ပေး နေလိုက်တယ် ပါးလေးကိုနမ်းလိုက် နုတ်ခမ်းလေးနမ်းလိုက်လုပ်နေမိတယ် တစ်ဆင့်တက်ပြီးသူ့နို့လေးတွေကိုအင်္ကျီ အပေါ်ကနေအုပ်ပြီး ကိုင်လိုက်တယ် အဲ့တော့မှသိတယ်သူအတွင်းခံမဝတ်ထားဘူးပဲ သူ့နိ့လေးတွေကိုနယ်ပြီးနို့သီးခေါင်းလေး ကိုစမ်းလိုက်တော့ နို့သီးခေါင်းလေးကအပြင်တောင်မထွက်သေးဘူး။
ကျွန်တော်လဲ သူ့အင်္ကျီကိုလှန်တင်ပြီးဆို့ဖို့လုပ်တော့ သူ့အင်္ကျီကိုအတင်းပြန်ဆွဲတယ် ကျွန်တော်လဲမရတော့ဘူး အောက်ကကောင်ကအရမ်းတောင်နေပြီ သူဝတ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်ပုဆိုးကိုခြေထောက်နဲ့နင်း အတင်းဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး သူ့စောက်ဖုတ်လေးကိုလက်နဲ့ကိုင်လိုက်တယ် ကျွန်တော်လက်ကိုသူဆွဲဖယ်တယ် မရဘူးကျွန်တော်တောင့် ထားလိုက်တယ် သူဖယ်လိုမရမှန်းလဲသိရောငိုပါလေရောဗျာ ‘ ကို ချစ်ကိုအတင်းကြီးမလုပ်ပါနဲ့နော် အချိန်လေးနဲနဲလောက် ပေးပါအုံးနော် ‘ဆိုပြီးငိုနေတယ်ဗျာ အခုမှပဲလက်ခံတော့တယ်ဗျာ သူများတွေပြောပြောနေတဲ့ ပါကင်လုပ်ရတာအာယုံနောက်တယ်ဆိုတာ သိပ်မှန်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်လဲသူ့နားမှာဆက်နေရင်ထက်လုပ်မိပြီး ကျော်မကောင်းကြားမကောင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီး သူ့ခေါင်းလေးပုတ်ပြီးမငိုနဲ့တော့နော်လို့ပြောပြီး ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ထမင်းစားခန်းဘက်ကိုထွက်လာလိုက်တယ် အောက်ကကောင်ကအရမ်းတောင်နေတော့ ဆေးလိပ်ထိုင်သောက်နေရင်းစိတ်ကိုပြန်ဖြေနေတာ ဆေးလိပ် နှစ်လိပ်ကုန်သွားမှပဲ အိမ်ရှေ့ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တယ် (ကောင်းခန်းစပြီဗျို့မှန်းထုမှန်းကလှိုင်း ဖို့ပြင်ထားကြတော့) ကျွန်တော့အိမ်ရှေ့ခန်းပြန်မရောက်ခင်မှာ စာကြည့်ခန်းတခါးက နဲနဲဟနေတာတွေတော့ အထဲကိုချောင်းကြည့်လိုက်တယ် အဲ့အခန်းကလိုက်ကာမတက်ထားတော့ အပြင်ကဝင်လာတဲ့ အလင်းရောင်နဲ့ ချစ် မက်တက်လေးရပ်နေတာကိုတွေ့နေရတယ် သူကျွန်တော်ကိုနောက်ချင်လို့ ပုန်းနေတာထင်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော်လဲတိတ်တိတ်လေး စာကြည့်ခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ် အထဲရောက်မှပဲအခြေအနေ ကိုသဘောပေါက်တော့တယ်။
ချစ်ဘာရပ်လုပ်နေလဲဆိုတာကို ဘယ်ဘက်ဘေးအိမ်ကလင်မယားပေါ့ဗျာ အမှန်အကန်ကိုလိုးနေလိုက်ကြတာ သူတို့လိုးနေတာမြင်ပြီး လီးပါချက်ချင်းပြန်တောင်သွားတယ် ကျွန်တော်တို့အိမ်ကလူမနေတာများတော့ လူမရှိ့ဘူးထင်ပြီး အိုက်လို့ထင်တယ် ပြတင်းပေါက်တွေဖွင့်ပြီးလိုးနေကြတာ သူတို့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရဘူး မှန်အနက်တွေ ကျွန်တော်တို့ပြတင်းပေါက်မှာ တက်ထားတာဆိုတော့ အပြင်ကနေမမြင်နိုင်ဘူး ပြီးတော့စာကြည့်ခန်း ကိုမီးလဲဖွင့်ထားဘူးဆိုတော့ အပြင်ကမြင်နိုင်စရာလုံးဝမရှိ့ဘူး ဘေးအိမ်ကလိုးနေကြတဲ့လင်မယားကို ကျွန်တော်ကောင်း ကောင်းသိတယ် ဘဲကြီးက အသက်လေးဆယ်လောက်ဖြစ်နေပြီ သင်္ဘောသား အမကြီးကတော့ နှစ်ဆယ့်ငါးလောက်ပဲရှိ့အုံးမယ် သူတို့လဲသူတို့အိမ်မှာနှစ်ယောက်ထဲ ဘဲကြီးသင်္ဘောတက်နေ တဲ့အချိန်ဆိုအမကြီးအမေနဲ့ညီမက လာနေပေးကြတယ် အခုဟိုဘဲကြီးက သဘောင်္ပြန်ရောက်ခါစထင်တယ် အမုန်းတွယ်နေတာ အမကြီးကိုပြတင်းပေါက်ဘောင်မှာ လက်ထောက်ခိုင်းနို့ကြီး တွေကိုကိုင်ပြီး နောက်ကနေ မက်တက်ကြီးကိုလိုးနေုကြတာ အမကြီးဆိုနုတ်ခမ်းကြီးကိုက်ပြီး တော်တော်ဖီးတက်နေပုံပဲ သူတို့လိုနေကြတာကိုလမ်းမကမမြင်နိုင်ဘူး အုပ်တစ်တိုင်ခပ်မြင်မြင်တွေခပ်ထားကြတော့ ကျွန်တော်တို့အိမ်နဲ့ကြားမှာတော့သံဇကာပဲတက်ထားတယ် အိမ်ချင်းငါးပေကျော်လေးပဲကွာတာဆိုတော့ သူတို့ကိုကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ် အသံတော့မကြားရဘူး အိမ်ကအသံလုံနေတယ် အသံပါကြားရရင်ပိုကောင်းမှာဗျာ အမကြီးရဲ့နို့ထွားထွားတွေပေါ်မှာချွေး လေးတွေတောင့်စို့လို့ ပြေးပြီးအဲ့နို့ကြီးကိုက်စို့ပလိုက်ချင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ဗျာ အခန်းထဲမှာက ပါကင်လေးရှိ့နေတယ်လေ ကျွန်တော်ဝင်လာတာကိုချစ်သိပုံတောင်မရဘူး သူလဲဟိုဘက်အိမ်ကလင်မယား လိုးနေတာကိုကြည့်နေတယ် ကျွန်တော်လဲသူနားကိုကပ်ပြီ ချစ်ကြည့်လို့ကောင်းလားလို့ မေလိုက်တော့သူလန့်ပြီးတွန့်သွားတယ် ပြီးလှည့်ထွက်ဖို့ လုပ်တော့ သူ့ပခုန်းလေးကိုင်ထိမ်းပြီး ဆက်ကြည်ရြအောင်လို့ ပြောလိုက်တော့ပြန်ညိမ်သွာတယ် သူအောက်ပိုင်းမှာ ဘာမှမဝတ်ထားဘူး ကျွန်တော်ချွတ်လိုက်ထဲက ပြန်မဝတ်ဖြစ်တာထင်တယ် ကျွန်တော်လဲနောက်ကနေဖက်ပြီး သူ့နို့လေးတွေကိုလက်တစ်ဖက်ကကိုင်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကသူ့ ပေါင်လေးတွေကိုပွတ်ပြီး ပေါင်းအတွင်းဖက်လေးကိုပွတ်လိုက် တော့ အားပါးပါးအရည်တွေအများကြီး ပဲပေါင်ထိတောင်ဆီးကျ နေတာ ဟိုဘက်အိမ်ကလင်မယား လိုးတာကြည့်ပြီး တော်တော်ဖီးတက်နေတာထင်တယ် ကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့ ‘ ချစ်ခံချင်နေပြီလား’ ‘ဟာ မခံချင်ပါဘူး ‘ ‘ ချစ်ကသာမခံချင်ဘူးပြောတာ အောက်မှာအရည်တွေ အများကြီးပဲ ‘ ‘ ဘာတွေပြောမှန်းလဲမသိဘူး ရှက်စရာကြီးကွာ ‘ သူ့နို့လေးတွေကိုအပြင်ကနေကိုင်ရတာ အားမရတော့ဘူး အင်္ကျီကြယ်သီသုံးလုံးလောက်ဖြုတ် အင်္ကျီရင်ဘက်ကိုဟလိုက်ပြီး တော့သူ့နို့လေးတွေကိုနယ်လိုက်တယ် အကာမပါပဲကိုင်ရတာဆိုတော့ တော်တော်ကိုင်လို့ကောင်းတယ် နောက်ကနေသူဖင်တုံးလေးကိုကိုင်ရင် စောက်ဖုတ်အဝလေးကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် ကျွန်တော်ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြီး ထောင်နေတဲ့လီးပေါ်ကို သူလက်ယူပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တော့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့လီးကိုညစ်ထားတယ်။
ဟိုဘက်မှာတော့မောသွားလို့ထင်တယ် ဖြေးဖြေးလေးလုပ်နေ ကြတယ် ဘဲကြီးကအမကြီးရဲ့နို့တွေကိုနယ်လိုက် နို့သီးခေါင်းလေးကိုခြေလိုက်နဲ့ လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်နစ်ချောင်းပူးကို အမကြီးကိုစုတ်ခိုင်းနေတယ် လျှာနဲ့လဲလျက်တယ် အနောက်ကနေလဲဖြေးဖြေးလေးလိုးနေတယ် ‘ ကို ချစ်ခြေထောက်တွေညောင်းနေပြီ ‘ အဲ့လိုပြောတာနဲ့ကျွန်တော်လဲ ပြတင်းပေါက်နားက စားပွဲပေါ်ကိုပွေ့တင်ပြီးကျွန်တော်ကနောက်က နေဖက်ပြီးသူ့ဒူးကိုထောင်ခိုင်းပြီး ပေါင်ကိုကားခိုင်းလိုက်တယ် လက်တစ်ဖက်ကပေါင်းကားပေးထားတဲ့ကြား ကစောက်ဖုတ်အဝလေးကိုနဲနဲလေးထိုးထည့်လိုက် စောက်စိလေးပွတ်လိုက်လုပ်ပြီး နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့နို့လေးတွေကိုင်ရင် ကျွန်တော့မယားအသစ်ချွတ်ချွတ်လေးနဲ့ ဟိုဘက်အိမ်ကလင်မယားလိုးနေကြတာ ကိုချောင်းကြည့်ရတာ တော်တော်ကိုဖီးတွေအရမ်းတက်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုမျက်နာချင်ဆိုင်ဆွဲ့လည့်ပြီး နုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်း နို့ကိုစို့ ပြီးဘာဂျာပါပေးလိုက်တယ်ဗျာ သူဆိုကော့ပြန်လန်နေတာပဲ ကျုပ်ပစပ်လဲပေပွသွားတာပဲ အဲမှာသူကမေးလာတယ် ကို လုပ်တော့မလားတဲ့ ကျုပ်ကလဲဒါကိုဆောင့်နေတာ သူ့ကိုပြန်မေးလိုက်တယ် ခံချင်နေပြီလားလို့ သူခေါင်းညိမ့်ပြတယ် အဲ့တော့ကျုပ်လဲ လီးနဲ့သူ့စောက်ဖုတ်လေး ကိုအပေါ်အောက်ပွတ်ပေး ပြီးလိုးဖို့ပြင်နေလိုက်တယ် ‘ ကိုထည့်လိုက်တော့ကွာ’ တဲ့ ‘အရမ်းနာရင်ပြောနော် ချစ် ‘ ဆိုပြီး ဖြည်ဖြည်ချင်းထည့်လိုက်တယ် သိပ်တောင်မထည့်လိုက်ရသေးဘူး အမှေ့ပါးကိုသွားထောက်မိတယ် သူ့ဆီက ‘အ’ ဆိုပြီးညည်းသံထွက်သွားတယ် ‘ ချစ် နာသွားလို့လား’ ‘ ရတယ် ကိုထက်ထည့်လေ’ ဆိုပြီး နုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး မျက်လုံးမိတ်ထားတယ် သူ့မျက်နာဘေးလေးကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာ။
ကျွန်တော်လဲ လီးကိုနဲနဲလေးစွဲထုတ်ပြီး ဖိပြီးထိုးထည့်လိုက်တယ် အမှေးပါးပေါက်သွားပြီ သူ့တစ်ကိုလုံးကော့တက်သွားပြီး မျက်လုံးဒေါင့်လေးက မျက်ရည်ဥလေးကျလာတယ် အသံတစ်ချက်မထွက်ဘူး သတ္တိခဲလေးဗျာ အံကြိပ်ခံတယ်ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာထင်တယ်လို့ တောင်တွေးလိုက်မိတယ် ကျွန်တော်လဲခပ်မှန်မှန်လေး ဆောင့်ပေးနေလိုက်တော့ သူနာတာတွပြောက်ပြီး ပြန်ကောင်းလာလို့ထင်တယ် ညည်းသံလေး တွေထွက်လာပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် လီးကို သူစောက်ဖုတ်အတွင်းကနေပြန်ပြန်ညစ်တယ် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ မပြီးသွားအောင်မနည်းထိမ်းထားရတယ် ကျွန်တော်လဲခပ်မြန်မြန်လေး ဆောင့်လို့းလိုက်တော့ သူကော့တက်လားပြီး သူ့စောက်ဖုတ်အတွင်းသားနဲ့လီးကိုပိုညှစ်လာတယ် နုတ်ခမ်းလေးကိုလဲကိုက်လိုက်ပြီး မျက်လုံးလေးတွေမိတ်သွားတယ် ကျွန်တော်လဲအားနဲ့ပိုဆောင့်ပေးလိုက်တော့ သူ ဇက်ကနဲဇက်ကနဲ သုံးခါလောက်တွန့်ပြီးညိမ်ကြသွားတယ် (အခုအချိန်ထိသူပြီးတော့မယ်ဆို နုတ်ခမ်းကိုက် မျက်လုံးလေးမှေးပြီး ပြီးတယ် အခုတော့သူနုတ်ခမ်း ကိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူပြီးတော့မယ် ဆိုတာကိုသိနေပြီလေ) ကျွန်တော်လဲစိတ်တင်းထားတာ ကိုလွတ်လိုက်တော့ လီးထိပ်ကနေ သုပ်ရည်တွေ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲပန်းထည့်လိုက်တယ် ပြီးတော့လီးကိုပြန်မထုတ်တော့ပဲသူ့အပေါ်မှာ မှောက်ပြီးအမောဖြေနေလိုက်တယ် ခနနေတော့ ဟိုဘက်အိမ်ကအတွဲကိုသတိရပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ သူတို့လဲပြီးသွားလို့နားနေကြပုံပဲ ကျွန်တော်ကြည့်နေတုံးပဲ ဘဲကြီးက အမကြီးကိုဆွဲထူတယ် ပြီးသူကကုတင်ပေါ်ကနံရံမှာမှီပြီး အမကြီးကိုသူ့ကိုမှီခိုင်းပြီး အမကြီးပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကားလိုက်တယ် အိုး………လှလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးဗျာ။
ကျွန်တော်နဲ့မျက်နာချင်းဆိုင်ဆိုတော့ အသေအချာကိုမြင်ရတာ ဖောင်းပြီတော့လိုးချင်စရာကြီး ဘဲကြီးကစောက်ဖုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖြဲပြီး တစ်ဖက်ကစောက်စိကို တို့လိုက် တို့လိုက်လုပ်နေတယ် ကျွန်တော်လဲ ချစ် ကိုစွဲထူလိုက်ပြီး သူတို့ဘက်ကိုလည့်ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုကားပြီး စောက်ဖုတ်ကိုပွတ်ပေးနေလိုက်တယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြည့် နေတုံးမှာပဲ ဘဲကြီးကအထုတ်တစ်ခုကိုလှမ်းယူလိုက်တယ် အထုတ်ကိုဖွင်လိုက်တော့အထဲကထွက်လာတာက လီးတုကြီး ‘ ကိုအဲဒါဘာကြီးလဲ’ ‘လီးတုကြီးလေ ချစ် နောက် ကို ချစ်ကိုဝယ်ပေးမယ်’ ‘ ဟာ ကိုကလဲ ချစ်ကလိုချင်တယ်ပြောနေလို့လား ‘ ‘ ချစ်မလိုချင်လဲ ကိုကတော့ဝယ်ပေးမှာပဲ ‘ အမကြီးကစောက်ဖုတ်ကိုဖြဲထားပေးပြီး ဘဲကြီးက လီးတုကြီးကို စောက်ဖုတ်ထဲဖြေးဖြေချင်းထည့်ပြီး လက်တစ်ဖက်ကစောက်စိကိုကိုင် နေတယ် ပြီးတော့ပုံမှန်လေး သွင်းလိုက်ထုတ်လိုက်လုပ်နေတယ် အမကြီးလဲအရမ်းကိုဖီးတွေတက်နေပုံရတယ် လီးတုကြီးမှာလဲ အမကြီးရဲ့စောက်ရည်တွေရွှဲနစ်နေတာပဲ ဘဲကြီးကအမကြီးကို ကုတင်ပေါ်ကိုဆွဲလည်းလိုက်ပြီး အမကြီးရဲ့ဖင်အောက်မှာလဲ ခေါင်းအုံးကိုခေါက်ပြီးတော့ခုလိုက်တယ် လီးကြီးနဲ့စောက်ဖုတ်ကိုပွတ် ပြီး ခုနကလီးတုအိပ်ထဲကနေ ဘူးတစ်ခုကိုတုတ်ပြီး သူ့လီးကို ဘူးထဲကအဆီတစ်မျိုးနဲ့လိမ်းပြီး အမကြီးရဲ့ဖင်ဝမှာလီးကိုတေ့လိုက်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းဖင်ထဲကိုသွင်းလိုက်တယ် အမကြီးကတော့လွတ်နေတဲ့ သူ့စောကိဖုတ်ကြီးကိုပွတ်နေပြီး ကော့ပြန်လန်နေတာပဲဗျာ အဲ့အချိန်မှာ ဘဲကြီးကအမကြီးလက်ထဲကို လီးတုကြီးပေးလိုက်တယ် အမကြီးလဲ လီးတုလက်ထဲရာက်လာတာနဲ့ သူ့စောက်ဖုတ်ဝမှာတေ့ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ် နှစ်ပေါက်လုံးလိုးခံရတာတော်တော်ကိုအရသာရှိ့ နေတယ်ထင်တယ် တော်တော်ကိုနာထန်ကြတဲ့လင်မယားဗျာ။
ကျွန်တော်လဲ ချစ်ရဲ့စောက်ဖုတ်ကိုအားရပါးရပွတ်ပြီး ကလိုင်းနေမိတယ် ချစ်လဲဟိုလင်မယားလိုးနေတာကိုကြည့်ပြီး တအားဖီးတွေတက်နေတယ်ထင်ပါတယ် ကလိုင်းနေတုံး အရည်တွေပါပန်းထွက်ပြီး ပြီးသွားတယ် သူပြီသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ သူ့စောက်စိလေးကိုဆက်ပြီးကလိနေရင်းနို့လေးတွေကိုပါနယ်ပေး နေပြီးသိပ်မကြာခင်မှာသူဖီးပြန်တက်လာတယ်ထင် သူ့ညည်းသံလေး တွေပြန်ကြားလာရတယ် သူ့ကိုသွေးတိုးစမ်းပြီး စနောက်ချင်နေတာ နဲ့သူကိုမေးလိုက်တယ် ‘ ချစ် ဟိုဘက်အိမ်ကအမကြီးကခပ်တောင့်တောင့်ကြီးနော် နာလဲထန်မဲ့ပုံပဲ လိုးလို့တော့တော်တော်ကောင်းမှားပဲ’ လို့ပြောလိုက် တော့ သူကကျွန်တော်ကိုပြန်ခံပက်တယ် ‘ ကို လိုးချင်ရင်သွားလိုးလေ ကို သွားလိုးရင် ချစ်ကလဲ အဲ့ဘဲကြီးလိုးတာကိုခံလိုက်မှာပေါ့ ‘ တဲ့ ‘ ချစ်က အဲ့ဘဲကြီးလိုတာကိုခံမယ်ဆိုရင် ကိုက အဲ့ဘဲကြီးချစ်ကိုလိုးဖို့ ချစ် စောက်ဖုတ်ကိုဟော့လိုဖြဲထားပေးလိုက်မှာပေါ့ ‘ လို့ပြောပြီရင်း စောက်ဖုတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီးဖြဲလိုက်တယ် အဲလိုပြောပြီးစောက်ဖုတ်ဖြဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ကိုယ်လုံးလေး သိသိသာသာတုံတက်သွားပြီး မျက်လုံးလေးမှေး နုတ်ခမ်းလေးကိုက် ညည်းသံရှည်လေးသူဆီကထွက်လာပြီး ခြေချောင်းလေးတွေပါ ကုတ်သွာရှာတယ် စကားနဲ့တင်ဖီးအရမ်းလာသွားတယ်ထင်တယ် ဟိုဘက်အိမ်ကလင်မယားခပ်ကြမ်းကြမ်း လိုးတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်နော်တို့ နောက်တစ်ချီထက်လိုးကြတယ် ပြီးတော့ စာကြည့်ခန်းထဲက စာပွဲပေါ်က ကျွန်တော်သုတ်ရည်နဲ့ သူ့အမှေးပါးပေါက်သွားလို့ထွက်တဲ့သွေးစ နဲနဲရောပြီး စာပွဲပေါ်ပေနေတာတွေကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး ရေအတူသွားချိုးကြတယ် ရေချိုးခန်းထဲရောက်တော့ ဆပ်ပြာတိုက်ပေးရင်း လီးပြန်တောင်လာလို့ ထပ်လိုးလိုက်ကြသေးတယ် အိပ်ခန်းထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာ မိုးတောင်လင်းတော့မယ် ကျွန်တော်တို့လင်မယားရဲ့ မင်္ဂလာဦးညကတော့အိပ်ခန်းထဲမဟုတ်ပဲ စာကြည့်ခန်းထဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ ဒါပါပဲ … ပြီးပါပြီ။
ကပိုင် ရွာ ဒိတ်ဒိတ်ကျဲ သူဌေး နှစ်ယောက်တွင် သား ၊ သမီး တ ယောက်စီရှိကြသည်။ ချောကြ လှသည်။ အရွယ်ရောက် သော် သူတို့ ကို ပေးစားလိုက်ကြ ၏။ ရွှေပေါ်မြတင် ။ နတ်ရေးတဲ့ဖူးစာ။ ကောင် မ လေးက နာမည် မဆန်း။ ယခု သားသမီးယောက် မွေးပြီးပြီ။ တသားမွေး တ သွေးလှ ဆိုတဲ့ စကား မဆန်းက သက်သေ ပြသည်။ မွေးလေ လှလေ ဆိုသော် မလွန်။ မ မွေးခင် က ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် လှ၏။ သား သုံးယောက် အ မေဖြစ်တော့ ဖွံ့ဖွံ့ထွားထွားလှ ပြန်ချေသည်။ သို့ သော် မဆန်းကို […]
ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်အိမ်ထောင်ပြုမည်ဆိုလျှင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲကိုကျင်းပ ​လေ့ရှိကြတယ်။ နယ်ခြားနေတဲ့စုံတွဲတွေဆိုတစ်ဖက်မှာတစ်ပွဲစီကျင်းပကျတယ်။အများအားဖြင့်မိန်းကလေးဘက်မှာကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ ​အချို့​သောသူတွေအဖို့တစ်ပွဲသာကျင်းပသဖြင့်ကျန်တစ်ဖက်ကအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေအခက်တွေ့ကြရတယ်။ ယခုဇာတ်လမ်းကထိုပြသနာကိုအစပြုပြီးအိအိငြိမ်း​ဆိုတဲ့ကောင်မလေးအတွက်လမ်းနှစ်သွယ်ကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တယ်။ တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရင်ကျန်တစ်ခုကိုရင်နာစွာစွန့်ပစ်ရမှာပါ…။ အလယ်တန်းပြဆရာမလေးအိအိငြိမ်းချစ်​​သောကိုနှင့်အိမ်ထောင်ရက်​သားကျပြီဖြစ်၍ကိုအလုပ်သွားချိန်​စ​နေ​နေ့တွင်​အိအိငြိမ်း တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်ကျန်ခဲ့သည်။ အိအိငြိမ်းမှာကိုနှင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည်မှစ၍ကိုနှင့်တစ်​ခါသာချစ်ဖူးသေးသည်။ အိအိငြိမ်းမှာဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိမိန်းကလေးဖြစ်သဖြင့်ကိုကအိအိငြိမ်းငြင်းဆန်သဖြင့်အင်္ကျီမချွတ်ဖူးသေး။ ဟို​နေ့ကထဘီလေးကိုအသာလှန်ကာ၃မိနစ်ခန့်လုပ်ပြီးလျှင်ကိုကပြီးသွားသည်။ အိအိငြိမ်းမှာအသက်၂၅နှစ်ခန့်ရှိပြီးအသားလေးကဖြူဝင်းစိုပြည်သည်။ အထူးသဖြင့်နက်မှောင်နေသောဆံကေသာလေးများမှာအိအိငြိမ်းကိုမဟာဆန်၍ကျက်သရေရှိစေသည်။ အရပ်က၅ပေ၆လက်မခန့်ရှိပြီးအရပ်နှင့်လိုက်အောင်ပင်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့နေရာနှင့်သူအချိုးကျနေသည်။ သေးသွယ်သောခါးလေးအောက်မှစွင့်ကားလုံးဝန်းသောတင်သားများနှင့်မို့တင်း၍ကြွရွနေသောရင်သားနှစ်မွှာတို့မှာမြင်သူပုရိသတို့ကိုလည်ပြန်ငေးစေသည်။ ​ကျောင်းချိန်​တွင်​ဆိုလျှင်​အိအိငြိမ်းသည်ပါးတွင်သနပ်ခါးလေးများပါးပါးလိမ်း၍သူမဧ။်​နက်မောင်လှသောဆံပင်များကိုထုံးထားသည်မှာ ခန့်ညား​ချော​မောလွန်းလှသည်။ ​နေ့ခင်းအချိန်များသည်ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်း၏ကိုယ်လုံးအလှဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ဆရာမ​လေး၏ကျောင်းစိမ်းအင်္ကျီမှာအလွန်ပါးလွှာ သည်မဟုတ်​​သော်​လည်း​တော်​​တော်​​လေးကိုပါးသည်​။ထိုအခါကျောင်းအင်္ကျီအဖြူရောင်အောက်မှာထင်ရှားလှသော အသားရောင်မြန်မာဘော်လီနှင့်ဝင်းဝါလှပ​သောနို့အုံကြီးများကိုအထင်အရှားမြင်​နေရတတ်​သည်။ ဆရာမ၏​ဘော်​လီ​ပေါ်မှ၃ပုံ၁ပုံခန့်​လျှံထွက်​​နေ​သောနို့အုံကြီးသည်လည်းမြင်သမျှယောကျာ်းတိုင်းအားစိန်ခေါ်နေသလိုဖြစ်​နေသည်။ ဆရာမ​လေးအိအိငြိမ်းများလမ်းလျှောက်လိုက်ရင်​အဖြူရောင်ခါးတိုရင်ဖုံးလေးနှင့်ကျောင်းစိမ်းထမီအထက်ဆင်လေးကြားမှပေါ်ထွက် လာတဲ့ဖြူဖွေးချောမွတ်နေတဲ့ခါးစပ်နေရာလေးက၀င်းခနဲဝင်းခနဲ…ခပ်တင်းတင်းဆွဲစည်းထားသောအထက်ဆင်လေးအောက်မှတင်းရင်းကားထွက်နေသောတင်သားစိုင်တို့မှာနိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် ခါးကျင်ကျင်လေးအောက်မှသိသာထင်ရှားစွာကားထွက်နေတယ်….တင်သားတို့ရဲ့အောက်ပိုင်းနေရာလေးမှာလည်းသိသာထင်ရှားစွာပေါ်ထွက်နေတဲ့အောက်ခံဘောင်းဘီကြိုးလေးမှာအစင်းလိုက် အထင်းသား….စစ်ကိုင်းအိုးးးလားဂစ်တာရှိတ်လား…မင်းကြီးကြိုက်လား..အို…..ဘာနဲ့တင်စားခိုင်းနှိုင်းရမလဲမသိတော့။ လမ်းလျှောက်ဟန်စကားပြောဟန်တို့မှာလည်းသိမ်သိမ်မွေ့မွေ့တိုးတိုးညင်းညင်းလေးဖြစ်သည်။ရုပ်ရည်လေးမှာလှသည်ဆိုသည်ထက်ချောသည်ဆိုလျှင်ပိုမှန်မည်။ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်လေရင်ထဲထိစေသည့်အလှပိုင်ရှင်မျိုးဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးခါစသုံးရက်သာရှိသေးတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီးသည်လေးအိအိငြိမ်း​အိမ်တံခါးခေါက်သံကြောင့်အပြေးကလေးထွက်လာမိသည်။လင်သားကိုမင်းသစ်​အလုပ်ပြန်လာရင်ကြိုဖို့အလှဆုံးပြင်ပြီးအပြေးကလေးထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။တံခါးလေးဖွင့်ပေးသောအခါကိုမင်းသစ်​အပြင်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပါလာလေသည်။ ”အော်…ဧည့်သည်တွေပါလား…အိမ်ထဲကြွပါရှင့်” အသီးသီးအခန်းထဲဝင်လိုက်ကြလေသည်။ ”မိန်းမရေ….ဒီနေ့ရုံးကကောင်တွေကိုလည်းပြုစုရသေးတယ်…ကိုအိမ်ပြန်နောက်ကျလို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်…” အသံကနည်းနည်းမူးစပ်စပ်ဖြစ်နေသည်။ ”ရပါတယ်အကိုရယ်…အိတို့မင်္ဂလာဆောင်ကအဝေးမှာဆောင်တာဆိုတော့သူတို့ကိုပြန်ဧည့်ခံရမှာပေါ့” ”မှန်တာပေါ့မိန်းမရာ…ဒီကနှစ်ယောက်ကဒီကွန်ဒိုကအိမ်နီးနားချင်းတွေပါ..” အိအိငြိမ်း​အပြုံးလေးဖြင့်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်။မင်းသစ်​လျှာလေးအာလေးဖြင့် ”ဒီဘက်ကသန်းကြိုင်​​တဲ့သူကရှေ့အခန်းက၊ဒီဘက်က​အောင်​​မောင်း​တဲ့သူကအောက်ထပ်ကသူတို့ကိုပြုစုဖို့ခေါ်လာတာ၊ဒီမှာအရက်နဲ့ဘီယာပါလာတယ်…မိန်းမအမြည်းတစ်ခုခုစီစဉ်ပေး” ”​ကောင်းပါပြီ​ရှင့်…ရပါစေမယ်” အိအိငြိမ်း​နောက်ဘေးခန်းကိုတည်ငြိမ်စွာထွက်သွားလေသည်။သူမရဲ့နိမ့်ချည်မြင့်ချည်တင်သားတွေနဲ့နောက်ကျောအလှကိုသန်းကြိုင်​​မျက်စိတစ်ဆုံးအရသာခံကြည့်ရှုလိုက်လေသည်။ သူမ၏ဖင်တုံးကြီးတွေတုန်ခါသွားတာကြည့်ရင်းသန်းကြိုင်​တံထွေးသာမျိုချနေမိသည်။ဒီဆော်​လေးကိုဖင်ကုန်းခိုင်းပြီးနောက်ကနေခွလိုးလိုက်ရရင်တော့သေပျော်ပါပြီလို့​တွေးမိသည်။ သန်းကြိုင်​ဒီနေ့တော်တော်တင်းနေသည်။ အလုပ်နောက်ကျလို့သူဌေးကကောသည်။ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်စောက်ကုလားတွေဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအဆဲခံလိုက်ရ ​သေးသည်။အသားမဲတာနဲ့ပဲလူလူချင်းခွဲခြားဆက်ဆံနေကြတာကိုး။ ဒီတိုက်​ခန်းကမိန်းမက​တော်​​တော်​​ချောတယ်​။​ဆရာမ​လေးတဲ့။ရောက်​လာတာ၂ရက်​ပဲရှိ​သေးသည်​။ အခု​တော့သူ့​ယောက်ျားဖြစ်​သူကမိတ်​ဆက်​​ပေး​တော့​သေချာကြည့်​မိသည်​။ေ​တာ်​​တော်​​ချောပြီး​တော်​​တော်​လဲ​တောင့်​​ကြောင်းအနီးကပ်​ကြည့်​မှပိုသိလိုက်​ရသည်​။ ”ကဲကိုယ့်လူတို့…ကျွန်​တော်လည်းသွားကူလိုက်အုန်းမယ်ခဏ…ခဏ” မင်းသစ်​လည်းအိအိငြိမ်း​နောက်လိုက်သွားလေသည်။မကြာမီအိအိငြိမ်း​ရောက်လာကာစားပွဲခုံပေါ်ဖန်ခွက်လေးတွေလာချပေးသည်။ စားပွဲကိုခါးလေးကုန်းကာချဖန်ခွက်ချလိုက်သည်မို့ဟိုက်သွားသောအင်္ကျီကြောင့်အိအိငြိမ်း​ရဲ့ရင်သားဖွေးဖွေးနုနု​တွေကိုသန်းကြိုင်​​နဲ့ အောင်​​မောင်း​ထပ်မြင်လိုက်ရတော့လီးတွေတောင်ကုန်ကျသည်။အိအိငြိမ်းရင်​သား​ဖွေး​ဖွေး​တွေကို​ဘော်​လီရင်​ပုံခွက်​အထိ​သေချာ မြင်​လိုက်​ရတာ​ကြောင့်​သန်းကြိုင်​မျက်​စိထဲကမထွက်​နိုင်​​တော့။ သန်းကြိုင်​က​တော့အိအိငြိမ်းကိုစိတ်​ထဲက​နေအ​သေမုဒိမ်းကျင့်​​နေပြီ။ အိအိငြိမ်း​အမြည်းစီစဉ်ရန်ထပ်ဝင်သွားပြန်ပြီ​။ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​​ကကာမလိုက်စားတဲ့လူတစ်ယောက်။သူ့မှာအိပ်ဆေးတွေကွန်ဒုံးတွေအမြဲဆောင်ထားတတ်တယ်။သန်းကြိုင်​​ဖန်ခွက်တွေထဲအရက်တွေထည့်ပေးထားလိုက်သည်။အိအိငြိမ်း​ရဲ့ခွက်ထဲအချိုရည်ထည့်ကာ အိပ်ဆေးမှုန့်​လေးခတ်ပေးလိုက်သည်။မင်းသစ်​ခွက်ထဲလည်းနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပြီးဟန်မပျက်ပြန်နေလေသည်။ ကုလားဒိန်​သန်းကြိုင်​​ကတစ်ကိုယ်ထီးသမားလူရှုပ်လူပွေ။​အောင်​​မောင်း​ကတော့မိန်းမနဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့မို့သိပ်​အတင့်မရဲဘဲ အကဲသာခတ်နေသည်။ […]
ကျွန်နော်ရဲ့တကယ်အဖြစ်ပျက်လေးပါ။မှတ်မိသလောက်နဲ့ ရေးတက်သလောက်ရေးတာမို့ အဆင်မပြေရင် ဆောရီး ကျနော်အိမ်ထောင်ကျတော့ ဆယ့်ရှစ်နှစ်အရွယ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်၊မိန်းမနဲ့လဲအသက်အတူတူ….. ကျန်နော်လူပျိုဘဝတုံးကရည်းစား သုံးလေးယောက်လောက်ရှိတော့၊အားလုံးကိုလည်း လှည်ပတ်ကြိတ်ပါတယ်။ အဲဒီအထဲကပုပုသေးသေးနဲ့ဖင်ကောက်ပြီးအိုးကြီးတဲ့.စော်လေးကိုအကြိတ်လွန်ပြီးကုန်းထောက် ဗိုက်ကြီး လို့ယူလိုက်ရတယ်။ အလကားစားနေရတဲ့ဂွင် အတော်အများပိတ်သွားပြီပေါ့။မွေးရာပါလီးအသင့်တင့်ကြီးပြီး…အကိုတယောက်ထည့်ပေးတဲ့ဂေါ်လီကြောင့် မိန်းမရည်းစားဘဝထည်းက အမြဲမုတ်ပေးပါတယ်။…… မိန်းမဗိုက်ခြောက်လလောက်မှာ မိန်းမရဲ့သဘောအတိုင်း ယောက္ခမ တိုင်းပြည်စရောက်ခဲ့တယ်လေ။ စရောက်ကတည်းကအဆင်မပြေပါဘူး.သိတဲ့အတိုင်းပဲယောက္ခမနဲ့သမက်က..အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာခံရတာဓလေ့ထုံးစံလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ကျနော်ကလဲမျက်နှာချင်းမဆိုင်မိအောင်နေခဲ့ပါတယ်တနေ့ယောက္ခမကြီးရေလျှားနဲ့ရေချိုးနေတာကိုအမှတ်မထင်ကြည့်မိလိုက်တော့၊အတော်ကိတ်တဲ့နို့ နှစ်လုံးနဲ့ကားပြီးထင်းနေတဲ့ရေစိုထမီအောက်ကဖင်ကြီးကိုသတိထားမိသွားတယ်။ ကို့အကြိုက်နဲ့တစ်ထပ်ထည်းပါလားလို့ စိတ်ထဲမှာရေရွတ်မိတယ်ဗျာ။ယောက်က္ခမကြီးရေချိုးတဲ့အချိန်တိုင်း ချောင်းနေမိတော့တာပေါ့။ ကိူ့မိန်းမထက်တောင်အများကြီးကိတ်နေသေးတော့ စိတ်ကပစ်မှားပြီး ယောက္ခမ ကိုစပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။ လုံးဝမဖစ်သင့်တဲ့အရာပါ ယောက္ခမ ကြီးကသားသမီးနှစ်ယောက်…. မိန်းမကအကြီး..အသက်က၄၀လောက်၊ ဘော်ဒီကနည်းနည်းဝပေမယ့် တင်.ရင်.ခါးကသူနေရာနဲ့သူမိုက်နေတုံးပဲ၊သတိထားပြီးလိုက်လိုက်ကြည့်မိလေလေ.. ယောက္ခမ အပေါမကြည်တာတွေမရှိတော့ပဲ.သူယောကျာင်္းကြီးကိုအတော်ကိုမနာလိုဖြစ်မိတယ်။ ………… ယောက္ခမ ရဲ့နို့အုံကြီးတင်ပဆုံကြီးကိုမြင်တိုင်းဂွင်းတိုက်လိုက်အားမရရင်ဗိုက်ကြီးနဲ့မိန်းမကိုပဲလိုးနေရတာပေါ့။ ယောက္ခမလင်မယားလိုးနေတာမြင်ရဖို့ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားရပါတယ်.အိမ် ကငှါးနေတာဆိုတော့အဖစ်ဆောက်ထားလို့ကံကောင်း……. ယောက္ခမ လင်မယားအိပ်တဲ့အခန်းကို ကိုးရက် ဆယ်ရက်လောက်ကြာတယ်၊ပြန်လာတဲ့အချိန်တိုင်းအိပ်ရေးပျက်ခံပြီးချောင်းရတာမြင်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာတိုင်းအပေါက်ချဲ့ထားတယ်။ သူ့ယောကျားင်္က ကားကြီးမောင်းသမား၊ ယောက်က္ခထီးကလဲကားသမားပီပီ စော်အသေးလေးတွေနဲ့ပွေးနေတော့ သူ့မိန်းမကြီးကိုပစ်ထားတယ်ထင်တယ်။ ချောင်းတိုင်းတခါမှမတွေ့ရဘူးလေ…..ကံကောင်းချင်တဲ့တညမှာ ၁နာရီကျော်လောက်တရေးနိုး အိမ်သာထတက်ရင်း.အသံကြားလိုက်တယ်။ […]